युवाका आशा - जनताका सारथी ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	युवाका आशा - जनताका सारथी ! » Nepal Fusion
युवाका आशा – जनताका सारथी !
तस्बिर: रवीन्द्र मिश्रकाे हाे।
जनताको दुःख र सुखको सारथी नै जननेता हुन्छ । सबै नेताः नेता हुदैनन केहि त भ्रष्टाचारी पनि हुदाँ रहेछन । इतिहासमा बिपि कोइराला र मदन भण्डारीले जनताको मन जितेका थिए । बिपि र मदनले परिवर्तकारी युगको नेतृत्व गरेका कारण नै जननेताको उपमा पाए । यी दुई नेताकै बैचारिक दृष्टिकोणको पसल खालेर चुनाब जित्ने नेता र पार्टीहरु अबका विवेकशील र विकासबादी राजनीतिक शक्ति रहेनन् । समय बदलिएको छ । युवाहरुको जागरणको अभियानमा जुटिरहेका छन् । राजनीतिलाई निस्वार्थ रुपमा सेवाका रुपमा बुझ्नेहरुको जमात मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएका छन । त्यसकारण पनि नेपाल नयाँ युगमा नयाँ जननेता जन्माइ सकेको छ । भ्रष्टहरु अत्तालिएका छन् । समाजमा जागरण ल्याउन नदिन उनीहरुले अनेकन प्रयास कायमै राखेका छन् तरपनि परिवर्तन चाहाँने शक्तिलाई कसैले छेक्न सक्दैन ।
ईतिहासका जननेताप्रति हाम्रो सधै सम्मान र प्रेरण रहिरहन्छ । उनीहरुको नाम भजाएर सत्तामा पुग्नेहरु प्रति हाम्रो सधै गुनासो रहन्छ । हामी गुनासो मात्रै होइन बिकल्प पनि तयार पार्न माहिर छौ । राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँहरुको महत्वपुर्ण योगदान रह्यो । नेपालमा राजनीतिक दलहरु मार्फत लोकतन्त्र स्थापना गर्नुभयो । लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने जिम्मा यो युगका जननेता रबीन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरुको काँधमा आएको छ । यहाँ मिश्र नै नेतृत्व भएका कारण उहाँ सम्बद्ध पार्टीका बिचारमा उहाँ नाम जोडिनु अन्यथा मानिने छैन । युवाहरुको महत्वपुर्ण सर्मथनले उहाँको देश परिवर्तन गर्ने अभियानमा नयाँ आशा थपिएको छ । देशले अर्को एक महान जननेता खोजेको छ । देश र नेपाली समाजको सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक संवृद्धि नामक नाराका साथ जननेता मिश्रको नेपाली राजनीतिमा आगमन भएको छ । यसमा सबै नेपालीहरुको ठुलो साथ र महत्वपुर्ण सल्लाहको अपेक्षा छ ।
कल्याणकारी लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्य, सहभागितामुलक लोकतन्त्र, समन्बयात्मक अर्थतन्त्र नेपालको मुख्य आबश्यकता हो । यसले नेपालको दिर्घकालीन बिकासको अबधारण निमार्ण गरेको छ । साझा विवेकशिल पार्टीको मुख्य बैचारिक सिद्धान्त पनि यी बिषयहरुमा आधारित रहेको स्पष्ट छ । हामीलाई अमेरिका, युरोपमा आधारित अर्थतन्त्र होइन, देशकै दृश्य अनुरुप नेपाल सुहाउदो लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र चाहिएको छ । अर्थमन्त्रीहरुले बिदेशी अर्थनीति अपनाउदा, दिन प्रतिदिन अर्थ धरासायी बन्दै गएको पनि अबगत नै छ । बिश्का धेरै देशहरुको अबस्था नाजुक थियो । तरपनि उनीहरुमा इच्छाशक्ति र समय सान्दार्भिक योजनका अर्थात नेता थिए । उनीहरु हाम्रो बिकासको गति भन्दा निकै माथी पुगिसके । ती देशहरुको भन्दा हाम्रो स्रोत र साधन प्रयाप्त नै छ । हामीले उत्पादनलाई मुख्य रुपमा उठाएका नसकेका कारण केहि बिकासको गतिमा अबरोध ब्यहोर्न प¥यो ।
जनताका दैनिक समस्या संग समन्बयकर्ता खाँचो थियो । अहिले हाम्रो समाजले जनताका प्रश्न र उत्तर खेल्न मात्रै होइन, हौसल्ला दिने नेतापनि पाइसकेको छ । देशको मुख्य समस्या भ्रष्टाचार र उत्पादनमा नजोडिनु हो । अहिले दैनिकजसो जनताकै घरदैलोमा पुगेर भ्रष्ट नेताको नालीबेली देखि जनतासंगै साक्षात्कार गर्ने जननेता नेपाली समाजले पाइसकेको छ । जो जनतासामु आधारभुत आबश्यकता र राष्ट्रियतामा दरो रुपले प्रस्तुत हुन्छ, त्यो नेता जननेता मानिन्छ, त्यो नेतृत्व जिवन्त रहन्छ । देश परिवर्तन गर्ने साझा विवेकशिल पार्टीको अभियान जारी छ । नेपालको जय होस् ।